एक अभिनेत्री जो देव आनन्दका लागि जीवनभरी अविवाहित रहिन्, थाहा पाउनुस् उनीबारे रोचक तथ्य – हिमाल न्युज
एक अभिनेत्री जो देव आनन्दका लागि जीवनभरी अविवाहित रहिन्, थाहा पाउनुस् उनीबारे रोचक तथ्य
बलिउडका सदाबहार अभिनेता देव आनन्दको डिसेम्बर तीन तारिखमा मृत्यु भएको हो । संसारबाट बिदा भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि उनी सिनेमाप्रेमी दर्शको मनमा अझै राज गर्छन् । धर्मदेव आनन्द उर्फ देव आनन्दको पुण्यतिथीमा उनीसँग सम्बन्धित यस्तो रोचक तथ्यबारे जानकारी लिऔं ।
भनिन्छ, जब देव मुम्बई छिरेका थिए तब उनको खल्तीमा ३० भारु मात्र थियो । त्यसपछि उनले आफ्नो मेहनत र कामप्रतिको निष्ठाले त्यो ३० भारुलाई लाखौं बनाए । देव आनन्दको जन्म २६ सेप्टेम्बर सन् १९२३ मा पंजाबको शकरगढ (अहिलेको पाकिस्तान) मा भएको थियो । उनलाई स्कूलमा डीडी भनेर बोलाइन्थ्यो ।
फिल्ममा पाइला राख्नुअघि र बीएको डिग्री प्राप्त गरेपछि उनले नेवीमा भर्ना हुन प्रयास गरेका थिए । तर असफल भएपछि उनका पिताले उनलाई आफ्नै अफिसको काममा लगाए । तर देव आनन्द २२ वर्षको उमेरमा मुम्बई आए । त्यहाँबाट उनको यात्रा यस्तो रह्यो कि त्यो एक उदाहरण बन्न सफल भयो । देव आनन्दको चर्चित फिल्म ‘काला पानी’ मा उनलाई कालो रङको कोट लगाउन रोक नै लगाइएको थियो । उनी कालो कोटमा अत्यधिक ह्यान्डसम देखिने र उनलाई देखेपछि महिलाले छतबाट हाम नफालून् भन्नका लागि यस्तो गरिएको बताइयो ।
करियर सुरु गरेको दुई वर्षपछि फिल्म ‘विद्या’ (सन् १९४८) को सुटिङको क्रममा उनको सुरैयासँग प्रेम बस्यो । फिल्मको गीत ‘किनारे किनारे चल जाएंगे’ मा दुबै एक डुङ्गामा सवार हुन्छन् र त्यो डुब्छ । हिरोले झैं देव आनन्दले सुरैयालाई बचाउँछन् र त्यति नै बेला उनले सुरैयासँग विवाह गर्ने निर्णय गर्छन् । त्यसपछि उनले फिल्मकै सेटमा तीन हजार भारुको औंठी दिएर प्रस्ताव पनि राखे तर सुरैयाकी हजुरआमा नातिनीको विवाह देव आनन्दसँग होस् भन्ने पक्षमा थिइनन् । स्थिती यस्तो आयो कि देव आनन्द र सुरैयाको बाटो अलग्गियो तर रोचक कुरा के भयो भने सुरैयाले अन्य कोहीसँग सम्बन्ध स्थापित गरिनन् र उनी जीवनभरी अविवाहित रहिन् ।
त्यसपछि देव आनन्दको जीवनमा कल्पना कार्तिक आइन् । गुरु दत्तको पहिलो फिल्म ‘बाजी’ मा देव आनन्द र कल्पना कार्तिकको जोडीलाई मानिसहरुले खुबै रुचाए । त्यसपछि दुबैले थुप्रै फिल्ममा अभिनय गरे जस्तै ‘आँधियाँ, ‘ट्रयाक्सी ड्राइभर’, ‘नौ दो ग्यारह’ । यति नै बेला दुबैबीच प्रेम बस्यो र फिल्म ‘ट्याक्सी ड्राइभर’ पछि उनीहरुले विवाह गरे ।
फिल्म ज्वेल थिफमा उनले जुन क्याप लगाएका थिए त्यो कोपेनहेगनबाट मगाइएको थियो ।
सुबोध मुखर्जीको फिल्म ‘जंगली’ र नासिर हुसैनको फिल्म ‘तिसरी मंजिल’ का लागि पहिलो रोजाई देव आनन्द थिए तर निर्मातासँगको मतभेदका कारण उनले दुबै फिल्म अस्विकार गरे । शम्मी कपुरले मौका पाए र उनी बने ‘याहू स्टार’ । देव आनन्द एक यस्ता अभिनेता हुन् जसले अमिताभ बच्चनबाहेक हरेक ठूला कलाकारसँग काम गरे । अमिताभ बच्चन जुन ‘जंजीर’ फिल्मबाट स्टार बने, त्यो देव आनन्दका लागि प्रस्तावित थियो ।
सन् १९७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले जब संकटकालको घोषणा गरिन् तब देव आनन्दले फिल्म जगतका आफ्ना केही साथीसँग मिलेर त्यसको घोर विरोध गरेका थिए । जब संकटकाल हटाइयो र देशमा चुनावको घोषणा गरियो तब उनले आफ्ना प्रशंसकसहित जनता पार्टीका लागि चुनाव प्रचारमा भाग लिए । पछि उनले नेशनल पार्टी अफ इन्डिया नामको एक राजनीतिक दलको पनि स्थापना गरे तर केही समयपछि त्यो भंग गरिदिए । त्यसपछि उनी राजनीतिक रुपमा सक्रिय नभएपनि समय–समयमा विभिन्न राजनीतिक मसलामा आफ्नो कडा प्रतिक्रिया दिइरहन्थे ।
देव आनन्दको फिल्म ‘हरे राम हरे कृष्ण’ मा उनकी बहिनीको भूमिका निभाउनका लागि कुनै स्थापित नायिका तयार थिएनन् । थुप्रै नयाँ युवतीको स्क्रिन टेस्टपछि पनि उनले सोचेको जस्तो अनुहार पाइरहेका थिएनन् । त्यति नै बेला एकदिन उनी एक पार्टीमा जिनत अमानसँग भेटे । उनी मिस एशियाको उपाधि जितेकी थिइन् । कुराकानीकै क्रममा जिनतले देव आनन्दलाई ब्यागबाट चुरोट झिकेर दिइन् । उनको यस्तो व्यवहारले देव आनन्द निकै प्रभावित भए र उनले जिनतलाई आफ्नो फिल्मका लागि साइन गराए ।
सबैलाई थाहा छ कि मुहम्मद रफीले देवका लागि थुप्रै फिल्मका गीत गाएका थिए । तर देव आनन्दले पनि रफीका लागि गीत गाएको बारे धेरैलाई थाहा नहोला । यी दुईले सन् १९६६ मा बनेको फिल्म ‘प्यार मोहब्बत’ मा सँगै गीत गाएका थिए । देव आनन्दले ३१ जुलाईमा रफीको पुण्यतिथीमा आयोजित एक समारोहमा यसबारे जानकारी दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मैले कहिले पनि गीत गाइनँ तर रफीको गीत ‘प्यार मोहब्बतको सिजा ये जिन्दगी क्या जिन्दगी…’ मा जुन हुर्रे…हुर्रे छ, त्यो मेरै आवाज हो । मैले त्यतिमात्र गाएँ ।’
चारपटक फिल्मफेयर अवार्ड जितिसकेका देव आनन्दलाई भारतीय सिनेमामा उल्लेखनीय योगदान दिएको भन्दै सन् २००१ मा भारत सरकारले प्रतिष्ठित पद्म भुषण प्रदान गरियो । त्यसको अर्को वर्ष सिनेमाको सबैभन्दा ठूलो सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान गरियो । सन् २०११ डिसेम्बर ३ तारिखमा देव आनन्दको लण्डनमा हृदयघातका कारण मृत्यु भयो । उनलाई मिडियामा एभरग्रीन स्टार भनिन्छ ।
आर्यन र साम्राज्ञीको जोडी पहिलो पटक मिडियामा ।...
गायक शिव परियारको नया गित ‘मात नलाग्ने’बोलको गीतमा...
सबैको अगाडी धमलाले श्रीमतीको गाला चुमेपछि ! भिडियो
पशुपति शर्मा र सम्झना भण्डारीको स्वरमा नयाँ तीज...
चर्चाका लागि अनेक हर्कतका कारण चर्चाको केन्द्र बने...
बिबाह पछि अझै बोल्ड बन्दै नायीका गरिमा पन्त...
बालीमा प्रियंका–आयुष्मानको रोमान्सः प्रशंसक भन्छन्, ‘लाइफ होस् त...
कन्ट्रोभर्सी क्विनः कलाको नाममा उत्ताउलो चर्तिकला !
तिहार सकिने बित्तिकै सलमान किन गए पञ्जाव?
‘आशिकी’का चर्चित नायक राहुल रोयलाई अब चिन्न मुश्किल,...